Telegram: Na-ekwuwapụta na o ruru narị nde ndị ọrụ anọ | Site na Linux
Naanị ụbọchị 2 gara aga, obe-ikpo okwu ozi ngwa oku «Telegram», nke a na-ejikarị eme ihe n'ụwa, n'ihi atụmatụ na ọrụ ya dị egwu, ekwuputala iru 400 nde ndị ọrụ.
Ke adianade do, nke a rụzuru ọ na-kwuru na, o nwere na mkpofu nke ya ọrụ Akwụkwọ mmado 20.000, akwụkwọ nyocha 2.0 na € 400K maka ndị okike nke ule mmụta.
N’agbanyeghi telegram, abụghị onwe ya ngwa ma ọ bụ ikpo okwu nke Free Software na Open Source, otu ihe ahu ka idi echedoro onwe, nkeonwe ma nwekwa onye ahia n'efu, na-echekarị na ndị hụrụ ya n'anya ma ọ bụ ndị ọrụ ya Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, ma ọ bụ ndị na-achọkwu nzuzo na nchedo na usoro nkwukọrịta ha. Dị ka ndị ọzọ anyị kwurula na mbụ, dị ka ezigbo ndị ọzọ WhatsApp.
Oge: Isi mmalite Izipu ozi Seczọ Ebumnuche
1 Telegram: 400 nde ndị ọrụ na ndị ọzọ ...
1.1 Ndị ọrụ 400 nde
1.2 Ajụjụ kacha mma
1.3 € 400K maka ndị okike ajụjụ
1.4 Akwụkwọ mmado 20.000
Telegram: 400 nde ndị ọrụ na ndị ọzọ ...
Eprel a, ndị Telegram ukara na saịtị ekwuola banyere ya Onwe blog ozi ọma na ajụjụ, nke anyị ga-aza maka obere mkpụmkpụ ole na ole.
Ndị ọrụ 400 nde
"Telegram ruru ndị ọrụ 400.000.000 kwa ọnwa, site na 300 nde otu afọ gara aga. Kwa ụbọchị ọbụlagodi ndị ọrụ ọhụụ 1,5 nde debanyere aha maka Telegram. Atụmatụ dị ka folda, nchekwa igwe ojii, na ngwa desktọọpụ na-eme Telegram nke ọma maka ọrụ dịpụrụ adịpụ ma na-amụ ihe n'oge mgbochi. Ọ bụ ihe ijuanya na Telegram bụ nọmba 1 mmekọrịta mgbasa ozi na-eji ngwa n'etiti ọtụtụ ndị ebudatara na mba 20. Ndị mmadụ n'ụwa nile na-ịmafe Telegram na ọsọ ọsọ".
Ajụjụ kacha mma
"Nwere ike ịgbakwunye nkọwa ga-apụta ka ndị ọrụ na-aza ajụjụ ndị a na-ajụ n'isiokwu a, iji nyere ha aka ịmụta ihe site na mmejọ ha ma ọ bụ nye ha nkọwa ndị ọzọ. Nkọwa ndị a na-eme ka ajụjụ ajụjụ Telegram zuo oke ọ bụghị naanị maka nyocha ihe ọmụma, kamakwa maka ịgbasa ya".
€ 400K maka ndị okike ajụjụ
"Ebe ụmụ akwụkwọ ruru ijeri abụọ nọghị n'ụlọ akwụkwọ ha ugbu a, ụwa dị ezigbo mkpa maka ngwa agụmakwụkwọ ịntanetị. Anyị chọrọ inyere aka dozie nsogbu a site na ịmepụta nchekwa data nke ule mmụta maka isiokwu niile na ọkwa niile. Iji mee nke a, taa, anyị na-ekwuputa mmeghe mmeghe nke anyị ga-ekesa EUR 2 nye ndị okike nke akwụkwọ nyocha".
Akwụkwọ mmado 20.000
"Ọ bụ ezie na Telegram bụ ebe a na-aga maka ndị mmado kemgbe ha pụtara na mbụ, ruo taa enweghị ụzọ dị mfe iji hụ akara mmado kachasị mma n'otu ebe. Iji dozie nke a, anyị mepụtara akwụkwọ ndekọ aha mmado ọhụrụ, ebe ị nwere ike ịchọgharị ma chọọ n'etiti ihe mmado Telegram akwụkwọ ikike dị elu nke 20.000 nke emepụtara n'ime afọ 5 gara aga.".
New mgbakwunye menu na gam akporo: Akụkụ niile nke menu mgbakwunye nwere ike ịnweta ugbu a dị ka ọkwa sara mbara, na-eme ka menu ahụ mara mma, na ọfụma, ma dị mfe iji.
Mmezi MacOS: Ugbu a, ha nwere ike ịnweta nnweta multimedia kwụ ọtọ site na ibe profaịlụ emegharịrị.
Ebumnuche ebumnuche: Ugbu a, i nwere ike itu animated agba
na nkata ọ bụla iji hụ onye na-ebu ụzọ.
Na nkenke, ọ bụrụ na ịkwabeghị na telegram, ọ dị mkpa na ị na-eme atụmatụ ma mezuo ya, ka ị kwụsị iji ngwa ndị ọzọ na-enweghị nchebe na nke onwe, dị ka WhatsApp.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na obe-ikpo okwu ozi ngwa oku «Telegram», nke a na-ejiwanye ụwa kwa ụbọchị, n'ihi atụmatụ na ọrụ ya dị egwu, nke, n'aka nke ya, nyekwara ya aka iru mmezu nke 400 ọtụtụ nde ndị ọrụ; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Telegram: Na-ekwuwapụta na o ruru narị nde ndị ọrụ anọ
Nsogbu a na-abụkarị otu. N’agbanyeghi otu ngwa si di nma, ndi mmadu achoghi igbanwe n’ihi nsogbu ntaneti. Na njedebe ha bara uru dị ka ihe ọzọ mgbe nke mbụ dara.
Daalụ Manson! Daalụ maka okwu gị nke ọma, agbanyeghị onwe m ahụla m na ndị ezinụlọ m, ndị ọrụ na ndị ọkachamara ọkachamara na-eji Telegram na WhatsApp. Oge ọ bụla m hụrụ ọtụtụ ndị ọzọ sonyere, yabụ, ọ bụghị naanị na ọ ga-ada, ọ na-abụrịrị ejiji, yabụ na-aga n'ihu na-abawanye.
Gaa ma ọ bụrụ na ọ bara uru, ihe niile na-enye visibiliti na ngwanrọ n'efu (na ọkwa ngwa ọ bụrụ na ọ bụ, ọ bụ ezie na emesia ajuju nke ndị sava ajuju) n'ihi na ị na-ahụkwu visibiliti ị nwere ọtụtụ mmadụ ị nwere ike iru. Ya mere, edemede ndị dị ka nke a na-adị mkpa, na-enweghị mgbagha ọ bụla.
Ekele Arazal! Daalụ maka okwu gị. Ọ gaghị eju m anya ma ọlị, ma ọ bụrụ na oge na-aga, na Telegram na-agbakọta ndị ọrụ, ọ na-aghọ ngwa na-emeghe n'efu ma na-emeghe, ruo ọkwa nkesa, ebe ọ bụ usoro teknụzụ nke na-amị ọtụtụ mkpụrụ azụmahịa na ọkwa azụmahịa.